January 28, 2021 - ApannPyay Media
January 28, 2021 by ApannPyay Media
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးအပြီး ဖျားနာခဲ့ရင် စားသင့်သော အစားအစာများ ဒေါက်တာခင်မိုးမိုး ကြက်သားဒါမှမဟုတ်အမဲသားညှပ်ပေါင်မုန့် ။ Sandwich. ဖျားပြီးကိုယ်လက်ကိုက်နေရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစာဖြစ်တဲ့ အဆီမပါဝင်တဲ့ အသားကို စားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစာကိုစားချင်စိတ် မရှိသော်လည်း ဒီအစာကို စားသုံးတာကြောင့် ရောဂါကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ စွမ်းအင် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်။ အဖျားရှိခါစမှ ဟင်းရွက်သုတ်တွေကို စားချင်စိတ်မရှိရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖျော်ရည်ကို သောက်ပေးပါ။ သူတို့မှာ ပါဝင်တဲ့ များစွာသော ဓာတ်တိုးပစ္စည်းမျိုးစုံကြောင့် ခုခံအားစနစ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်။ သူ့ကြောင့် အာဟာရရရှိနိုင်သလို အရည်ဓာတ်လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါအမြန်ပျောက်ကင်းဖို့လည်း ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်ပူပူနွေးနွေးကို သောက်တာက နှာခေါင်းမှ အမွေးအမှင်တွေက ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားတွေကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ။ ကြက်သွန်ဖြူက ခုခံအားစနစ်ကို … Read more
နေပြည်တော်လမ်း နေပူထဲ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးလျှာက်ကြည့်လိုက်သောအခါ
နေပြည်တော်လမ်း နေပူထဲ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးလျှာက်ကြည့်လိုက်သောအခါ နေပြည်တော် ခရီးသို့အသွား လမ်းခုလတ် တွင် နေပူပူ ထဲမှာ ကိုရင် ငယ်လေးတစ်ပါး လမ်းကြုံလိုက်ဖို့ ကားတားနေတာ မြင်နေတာ နဲ့ ကားရပ်ခိုင်းပြီးကားပေါ်သို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် တခြားကားတွေကလည်း လူအပြည့် ဆိုပြီး မရပ်ဘူး ဒကာကြီးရယ်တဲ့ ကိုရင်လေး ကားတားနေတာ ၂နာရီကျော်ကြာပြီတဲ့ ဒါနဲ့ ကိုရင်လေးကို ဘယ်ကျောင်းကလဲ ဘွဲ့နာမည် ဘယ်လိုမှည့်ခေါ်ပါသလဲ ဆိုပြီး စတင်မိတ်ဆက်ကာ သွားလိုတဲ့ ခရီး စဉ်မေးကြည့်တာ့ သံဃာ ၄၅ ပါးရှိတဲ့ တောရကျောင်းက ပါတဲ့ စာဝါ လိုက်ဖို့ ကျောင်းထိုင်ဆရာ တော် က စာအုပ် ခဲတံ များအတွက် မယ်တော်ကြီး ဆီ ပြန်အလှူ ခိုင်းလို့ ရွာ … Read more
Taxi စီးနေရင်းနဲ့ ကားမောင်းတဲ့ အဘဆီကို ဖုန်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာလို့ စမ်စုမိလိုက်တဲ့အခါ အလုပ်သွားဖို့ taxi တစ်စီးတားလိုက်မိသောအခါ taxi မောင်းတဲ့အဘရဲ့အဖြစ်က ရင်ထဲမကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ (Zawgyi Code ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်) အလုပ်သွားဖို့အိမ်ကအထွက် taxi တစ်စီးတားလိုက်မိတယ် အသက်အရွယ်ကလဲ ကြီးနေတာကြောင့် ဈေးမဆစ်တော့ဘဲ အဘပြောတဲ့ဈေးနဲ့ဘဲ စီးလိုက်တယ်။ Taxi စီးနေရင်းနဲ့ အဘဆီကို ဖုန်းတခုဝင်လာတယ် ဆေးရုံတင်ထားရတဲ့ သူ့မိန်းမကို ဆေးသွင်းပေးဖို့ ငွေလာသွင်းပေးဖို့ အကြောင်းကြားတဲ့ဖုန်းလေး ကြားကြားချင်း တကယ်ကို စိတ်ထဲမကောင်းသွားတာပါ ခနနေတော့ နောက်ထပ်ဖုန်းတခုထပ်ဝင်လာတယ်။ အိမ်ရှင်က အိမ်ဖယ်ပေးဖို့ပြောတဲ့ဖုန်း တကယ်စိတ်ထဲကိုဆို့သွားတာ အာ့တာနဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အဘအကြောင်းလေးမေးကျိတော့ ဒီနေ့မနက်ဘဲ အဘဇနီးက ကျနော်လဲဒီ့ထက်ပိုစပ်စုချင်တာနဲ့ အဘတို့မှာ ကျောထောက်နောက်ခံ သားသမီးတေမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ အဘမှာမျက်ရည်လေးဝဲပီး သားရယ် … Read more
အကြီးဆုံးသမီးကို ချစ်မိပီဆိုရင် ခင်ဗျားဒါတွေသိထားပါ
အကြီးဆုံးသမီးကို ချစ်မိပီဆိုရင် ခင်ဗျားဒါတွေသိထားပါ အကြီးဆုံး သမီးကို ချစ်မိပီ ဆိုရင် ခင်ဗျားသေဖို့ပြင်ထား အိမ်မှာ အလို လိုက်မခံ ရသမျှ အလျှော့ပေးရသမျှဒေ ခင်ဗျား ဆီက အကုန် ယူ လိမ့် မယ်… အကြီးဆုံးပီပီ ဆရာ လုပ်မယ် ဗိုလ်ကျမယ် အနိုင်ယူမယ် အလိုက်ကန်း ဆိုးမသိ ပူဆာမယ်…. ဘယ်အရာ မဆို ဦးစားပေးမှ ကြိုက်မယ် သက်ဦး အရူးဆို သလိုပဲ ငိုမယ် ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း ရယ်မယ်… အကောင်းကြီး ကနေ ရုတ်တရက် ဆူ ပူ မယ်… ရန်ဖြစ် ရင်လည်း မောင်ဒေ သဲဒေ ပျောက် နင်ဒေ ငါဒေ တခြား နာမ်စားဒေ နဲ့ ခက် … Read more
၁ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ငွေဝင်လာစေရမည်
၁ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ငွေဝင်လာစေရမည် ယတြာအလှုပါ။ယတြာတွေကို သေချာတွက်ချက်ပြီးမှ မျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေဝင်လာစေရန်အတွက် အာမခံပါသည် Shareပြီးသာ သေချာလိုက်လုပ်ပါ မိတ်ဆွေတွေကို ထက်ဆင့်မျှဝေပေးပါ ငွေသေချာပေါက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားကို မနက်၆:၀၀ကနေ၁၀:၀၀အတွင်း ပြောင်းဖူးပြုတ်၁ဖူး ကွေကာအုတ်၁ခွက် ပူပူလေးကပ်လှုပေးပါ။ပြီးရင် (၂၄)ပစ္စည်း ၅ခေါက်ရွတ်ပါ။ဘုရားကိုကပ်လှုရင် ခြေလက်မျက်နှာဆေးပြီးမှ သေချာကပ်လှုပါ။Shareပြီး လုပ်ပါ ၁ပတ်အတွင်း ထူးခြားပါတယ်။ ဆုတောင်းရမှာက မြတ်စွာဘုရားကို နေ့စဉ် […] ယတြာအလှုပါ။ယတြာတွေကို သေချာတွက်ချက်ပြီးမှ မျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေဝင်လာစေရန်အတွက် အာမခံပါသည် Shareပြီးသာ သေချာလိုက်လုပ်ပါ မိတ်ဆွေတွေကို ထက်ဆင့်မျှဝေပေးပါ ငွေသေချာပေါက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားကို မနက်၆:၀၀ကနေ၁၀:၀၀အတွင်း ပြောင်းဖူးပြုတ်၁ဖူး ကွေကာအုတ်၁ခွက် ပူပူလေးကပ်လှုပေးပါ။ပြီးရင် (၂၄)ပစ္စည်း ၅ခေါက်ရွတ်ပါ။ဘုရားကိုကပ်လှုရင် ခြေလက်မျက်နှာဆေးပြီးမှ သေချာကပ်လှုပါ။Shareပြီး လုပ်ပါ ၁ပတ်အတွင်း ထူးခြားပါတယ်။ ဆုတောင်းရမှာက မြတ်စွာဘုရားကို နေ့စဉ် ကုသိုလ်ပြုရသောအကျိုးကြောင့် … Read more
Facebook , Viber, Messger သုံးရင်း ထောင်နန်းမစံချင်ရင် ဒါလေးဖတ်ထားပါ Facebookသုံးသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မ ၆၆ ပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု …!ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဝင်ရောက ်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြစ်စေ၊ မူလအနေ အထားကိုဖြစ်စေ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်းနားရှင်အောင်ပြောရရင်ပုဒ်မ၆၆(က)facebook /gmail ကို ခိုးယူခြင်းပါ။ Passwordပြောင်းခြင်း / gmailပြောင်းခြင်းပါ။ ပုဒ်မ၆၆(ခ)။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုထိခိုက်စေရန် ဗိုင်းရပ်စ် ( သို့မဟုတ် )အခြားနည်း နဲ့ ဝင်ရောက်စေခြင်း…!! နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~ပုဒ်မ၆၆(ခ)link အတုတွေကတဆင့် အချက်အလက်passwordခိုးယူခြင်းပါ။#ပုဒ်မ၆၆(ဂ)။ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုသုံး၍ … Read more
တမာရွက်ဆိုတာ ခေါင်းစခြေအဆုံး ဘယ်ရောဂါမဆို အသုံးဝင်တာနော် တမာရွက်မှာ ပိုးမွှားအတော်များများကိုနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတာကြောင့် အနာဖြစ်တဲ့အခါ တမာရွက်ပြုတ်ရည်နဲ့ အနာကို ဖန်ရည်ဆေးပေးခြင်းဖြင့် အနာသက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တမာရွက်ပြုတ်ရည်ဖြင့် ရေချိုးပေးပါက အရေပြားယားယံတာတွေကို ပျောက်ကင်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အပူလောင်ဒဏ်ရာတွေ (ရေနွေးပူလောင်၊ ဆီပူလောင်) ဖြစ်ပါကလည်း တမာရွက်ပြုတ်ရည်ကို ဒဏ်ရာတဝိုက်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ပိုးမွှားမဝင်အောင်ကာကွယ်ပေးနိင်ပြီး အနာကျက်ဖို့အတွက်လည်း များစွာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ခံတွင်းပျက်ပြီး စားသောက်ချင်စိတ်မရှိတာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ၊ အစာမကြေတာတွေဖြစ်ပါက တမာရွက်နုကို ပြုတ်ပြီးစားခြင်းဖြင့် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းထဲသန်ကောင်တွေရှိရင်လည်း ကျစေနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားပြတ်ရှဒဏ်ရာရတာ၊ အရေပြားမှာ ယားနာတွေဖြစ်တာ၊ အနီကွက်ထတာတွေအတွက် တမာသီးကနေရတဲ့ တမာဆီကို လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ တမာဆီဟာ ဆံပင်သားကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဗောက်ထတာ၊ သန်းရှိတာ၊ ဆံပင်ကျွတ်တာတွေဖြစ်ပါက တမာဆီကိုဦးရေပြားမှာလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရိုးအဆစ်တွေ၊ ကြွက်သားတွေ … Read more
သံပုရာသီးရေနွေးစိမ်၏ အစွမ်းသတ္တိများ အခွံစိမ်းစိမ်းသံပုရာသီးတစ်လုံးကို လေးစိပ်စိပ်ပြီး ကြွေပုဂံတခုထဲတွင်ရေနွေးဖြူလောင်းထည့်ပါ ( ကြွေခွက်ကိုသာသုံးရမည်) ( အခွံဝါသည့်အသီးကိုမသုံးရ)။ လတ်ဆတ်သော အစိမ်းရောင်အခွံ သံပုရာသီးကို သာသုံးပါ အခွံကထွက်လာတဲ့ အဆီတွေက သွေးပေါင်ကိုထိန်းနိုင်စေပြီး အဝလွန်အဆီပိုတွေကို ကောင်းကျိုးပြုပါတယ် သံပုရာသီးတစ်နေ့တစ်လုံးပုံမှန်သောက်ပေးရင် သုံးလဆိုရင်ခါးနဲ့ဝမ်းဗိုက်မှအဆီများကျပြီး ကိုယ်ရည်စစ်သွားပါတယ်။သံပုရာသီးရေနွေးစိမ်သောက်ပေးခြင်းဖြင့်…ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေဓာတ်အဖြစ်ပံ့ပိုးပေးသည်။ရင်ပူခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ကြွက်သားနဲ့ အရိုးအဆစ်များ နာကျင်မူကိုသက်သာစေသည်။ကိုယ်တွင်း ကိုယ်ပ ရောင်ရမ်းနာများကို ကောင်းကျိုးပြုပါတယ်။အင်ဇိုင်းပမာဏ တိုးပွားလာစေပါတယ်။သွေးတိုးရောဂါသည်များကို ကောင်းကျိုးပြုစေပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်အနည်များကို ပျော်ဝင်စေနိုင်တာကြောင့်..ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း ,သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း.,မုံချိုအိတ်(ပန်ကရိယ) ကျောက်တည်ခြင်း စတာတွေမဖြစ်စေတော့ပါ။အရိုးအဆစ်အမြစ်များကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ယူရင်းအက်ဆစ်ဓာတ်ပမာဏကိုကျစေပါတယ်။အရိုးနုများ အရိုးနဲ့တစ်သျူးတွေကို ကျမ်းမာစေပါတယ်။အရေပြားပေါ်ရှိ အမာရွတ် အမည်းကွက် စသည်အပြစ်အနာအဆာများကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ ဆေးသောက်နည်း… ၁ ) နံနက်စာ စားပြီးချိန်မှ စသောက်ပါ ၂) လတ်ဆတ်တဲ့ အစိမ်းရောင်အခွံ သံပုရာသီးတစ်လုံးကိုသာသုံးပါထိုအစိမ်းရောင်အသီးက ပထမဆုံးရေနွေးခွက်မှာသာ အရသာချဉ်သော်လည်း … Read more
သုံးခွက်ပဲသောက် ခါးနာပျောက်တဲ့ဆေး ဒါဏ်ဖြစ်ပြီး မကြာခဏခါးနာနေသူများ ကြက်ခြေထောက် သုံးချောင်းကို နူးအိသည်အထိ ပြုတ်ပါ ။ ပြီးလျှင် အသင့်ပြင်ထားသည့်ဂွေးတောက်ရွက် လက်တစ်ဆုပ်ကို ထိုကြက်ခြေထောက်ပြုတ်အိုးထဲသို့ သုံးမိနစ်ခန့်ထည့်မွှေပြီး ကြွေပန်းကန်ထဲသို့ထည့်သောက်ပါ။သုံးကြိမ်သောက် ပျောက်ပါပြီ crd-org ဂွေးတောက်ရွက် အသုံးဝင်ပုံ အရွက်ကို မီးကင်ပြီး ကပ်လျှင် အနာစိမ်း၊ သွေးစုနာများ နုလျှင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပြည်ပေါက်၍ ပျောက်၏။ ထန်းရည်၊ အရက်၊ ကြာရှည်စွာ သောက်သုံး သူများ တစ်နှစ် တစ်ခါ ခွေးတောက်ရွက်ကို ကြက်သားနှင့် ချက်စားခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းရှိ အဆိပ် အတောက်များ ပြေပျောက် စေ၏။ အရွက်ကို ဟင်းခါး ချက်သောက်ခြင်း၊ ကြော်စားခြင်းဖြင့် လေအောင့်၊ လေထိုး၊ ဆီးချုပ် ရောဂါများ ပျောက်၏။ ခွေးတောက်ရွက်ကို … Read more
ဟင်းလိုစားမလား ဆေးလို သုံးမလား? ဆေးဘက်ဝင် ကင်းပုံပင် ကင်းပုံသီး
ဟင်းလိုစားမလား ဆေးလို သုံးမလား? ဆေးဘက်ဝင် ကင်းပုံပင် ကင်းပုံသီး မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလေ့ကျပေါက်သည်။ သစ်ပင် ခြံစည်းရိုးတို့တွင်လည်း ပေါက်လေ့ရှိသည်။အပင် – အမြဲစိမ်း သစ်ပျော့နွယ်ပင် ဖြစ်သည်။ ပင်စည် သေးသွယ်၍ နွယ်နှာမောင်း ၂-၄ ခု ခွဲထွက်သည်။အရွက် – ပင်စည် သို့မဟုတ် ရိုးတံ၏ တစ်ဖက်တည်း မှ ထွက်၏။ အဝိုက် ၃ ဝိုက်ပါ၍ ထိပ်အဝိုက်တွင် ထောင့် ၃ ထောင့် ပါပြီး ဘေးအဝိုက် ၂ ခုသည် လိပ်ပြာတောင်ပုံဖြစ်နေသည်။ ရွက်ရင်းဟိုက်သည် ၊ ရွက်ပြားပါး၍ ချောမွတ်သည် ။ ရွက်နား လှိုင်းတွန့် အနည်းငယ် ရှိ၏ ။ ရွက်ညာ အလွန်ရှည်သည်။အပွင့် … Read more